भारतीय मिडिया भन्छन्- नेपालले कालापानीमा जनगणनाको तयारी गर्दैछ:: Naya Nepal
भारतीय मिडिया भन्छन्- नेपालले कालापानीमा जनगणनाको तयारी गर्दैछ
१४ असोज, काठमाडौँ । आगामी वर्ष हुने जनगणनामा सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेट्छ कि समेट्दैन अहिलेसम्म यकिन छैन । राजनीतिक दल र सरकारी अधिकारीहरुले समेत यस बिषयमा खासै बोलेका छैनन् ।
तर, यतिबेला केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले जनगणनाको तयारी गरेको भनी समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, यो विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयमा समेत चर्चा भएको छ ।
भारतको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने अखबार टाइम्स अफ इन्डियाले नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई पाठ्यसामग्रीमा समावेश गरेपछि यी क्षेत्रमा जनगणनाको पनि तयारी गरिरहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । समाचार स्रोतलाई उल्लेख गर्दै सो अखबारले भनेको छ, ‘नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका केही आक्रामक तत्वहरु यी क्षेत्रमा जनगणना गराउन चाहन्छन् र त्यही अभ्यासका लागि केही प्रश्नावलीसमेत तयार पारिएको छ ।’
सो समाचारमा घरदैलोमा पुगेर जनगणना सम्पन्न गर्न सम्भव नभएमा अन्य विकल्पहरुको खोजी भइरहेकोसमेत उल्लेख छ । तर पिथौरागढका सरकारी अधिकारीहरुले भने यस विषयमा आफूहरुलाई केही पनि थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचारमा केही स्थानीयको भनाइसमेत उल्लेख गरिएको छ । टाइम्स अफ इन्डियाको यो समाचारलाई आधार मानेर अरु धेरै भारतीय सञ्चारमाध्यमले समाचार तयार पारेका छन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले सप्ताहिक रुपमा आयोजना गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा पनि यो विषयले चर्चा पाएको छ । २६ सेप्टेम्बरमा आयोजित भर्जुअल पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवलाई नेपालले कालापानीमा जनगणनाको तयारी गरिरहेको छ, यस सम्बन्धमा भारतको धारणा के छ ? सीमा विवादका सम्वन्धमा भारतले परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता कहिले गर्छ ? भनेर सोधिएको थियो ।
यसको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तव बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘सीमा विवादका सम्वन्धमा मैले पहिले नै पोजिसन स्पष्ट पारिसकेको छु, यो चरणमा म योभन्दा बढी केही बोल्न सक्दिनँ ।’ यस विषयमा धेरै पत्रकारहरुले प्रश्न सोधेका थिए तर प्रवक्ताले केही पनि बोलेनन् ।
जनगणनामा सोधिने प्रश्नावली तयार (नमूनासहित)
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि सर्वसाधारणले भर्नुपर्ने प्रश्नावलीलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । यससँगै अब जनगणनाका लागि प्रश्नावलीको टुंगो लागेको छ । आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ ।
हरेक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाका लागि नागरिकले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण अन्तर्गत परिचयात्मक विवरण भर्नुपर्नेछ । यसमा घर रहेको स्थान, ठेगाना रहनेछ । घरको विवरणमा भने तला, घर बनेको वर्ष, घर प्रयोग भएको प्रयोजन र घरमा बस्ने परिवारको संख्या गणना गरिने भएको छ ।
परिवारमा रहेका संख्या, घरमा पालेका गाइवस्तु तथा जनवारको समेत विवरण भरिने भएको छ । कृषि प्रयोजनमा प्रयोग भएको जग्गा, व्यक्तिका नाममा रहेको बैंक खाता, शैक्षिक विवरण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको भए त्यसको समेत विवरण जनगणनाका लागि भर्नुपर्नेछ ।
मुख्य प्रश्नावलीमा भने परिचयात्मक विवरण भर्नु पर्नेछ । यस विवरणमा व्यक्तिगत जीवनमा प्रयोग भएका वस्तुहरुको समेत विवरण भर्नुपर्छ ।
जसमा घरभित्र रहेका रेडियो, टेलिभिजन र शौचालयसम्मका विवरण भर्ने गरी प्रश्नावली तय गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
विदेश गएका परिवारका सदस्यको विवरण, महिलाका नाममा जग्गा भए त्यसको विवरण समेत जनगणनाले समेट्ने भएको छ ।
जनगणनामा आर्थिक विवरणतर्फ आम्दानीको स्रोत, आर्थिक गतिविधिमा संलग्न सदस्य सदस्य संख्या, काम नगर्ने भए त्यसको कारण समेत उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा सोधिने प्रश्नावली सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रश्नावलीमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सहित कुल ७६ प्रश्न समेटिएका छन् ।
प्रश्नावली तयार हुनुलाई जनगणनाका लागि नभई नहुनेमध्येको एउटा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको मानिन्छ । तर नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण वि.सं. १९६८ देखि हरेक दश वर्षमा हुँदै आएको जनगणना आगामी वर्ष होला कि नहोला भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ ।
१२ औं जनगणनाका लागि २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ गतेको मिति निर्धारण गरिएको छ । तथ्यांक विभागका अधिकारीहरू कोरोना नियन्त्रणमा नआई जनगणना सम्भव नहुने बताउँछन् ।
‘राष्ट्रिय जनगणना भनेको प्रतिनिधिमुलक वा अनलाइनबाट गर्न मिल्ने गणना होइन,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रत्येक घरमा पुगेर गरिने वास्तविक गणना भएकाले महामारीका बेला जनगणना सम्भव छैन ।’
तथ्यांक विभागले गर्दै आएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण कोरोनाकै कारण स्थगित छ । सन् २०१६ मै सम्पन्न हुनु पर्ने यो सर्वेक्षण रोकिदा गरिबी मापनमा समस्या परेको जानकारहरू बताउँछन् ।
जनसंख्याका प्राध्यापक डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ जीवनस्तर सर्वेविना गरिबी पहिचान गर्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सर्वेक्षण सम्पन्न हुन नसक्दा वास्तविक तथ्यांकको सट्टा प्रक्षेपित तथ्यांकलाई आधार मानेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
कोभिड–१९ ले गर्दा औद्योगिक सर्वेक्षण पनि रोकिएको विभागले जानकारी दिएको छ । तर जनगणनाको तयारीलाई भने निरन्तरता दिइएको विभागको दाबी छ ।
माघसम्म स्थिति सहज भए २०७८ मै जनगणना : विभाग
मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत प्रश्नावली छाप्नका लागि तथ्यांक विभागले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठ कोरोना महामारीका बीच विभागले जनगणनाको तयारीलाई तीव्रता दिएको बताउँछन् ।
आगामी माघमा ‘प्रशिक्षक तालिम’ सञ्चालन गर्ने विभागको कार्यतालिका छ । त्यसपछि प्रशिक्षकहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा तालिम दिन्छन् । गणकहरूलाई बैशाखमा तालिम सञ्चालन गर्ने विभागको तयारी छ ।
२५ जेठमा फिल्डमा जनगणना सुरु गर्न चैतमा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना भइसकेको हुनुपर्दछ ।
‘६–७ महिनामा मात्रै समय बाँकी भएकाले निषेधाज्ञाबीच तयारीमा लागेका छौं,’ महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘माघसम्म स्थिति सहज बने निर्धारित मितिमै जनगणना सम्पन्न गर्छौं ।’
सबैलाई एकै थरी प्रश्नावली
यसअघिका जनगणनामा दुई खाले प्रश्नावली तयार पारिन्थ्यो । सबैलाई सोध्ने एउटा प्रश्नावली हुन्थ्यो भने बाँकी २० प्रतिशतलाई पूरक प्रश्न गरिन्थ्यो ।
आगामी जनगणनामा भने सबैलाई एकैथरी प्रश्न सोधिने विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सात प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहका फरक–फरक विवरण राख्ने गरी प्रश्नावली बनाइएको छ । यसअघिको जनगणनामा भने ७५ जिल्लाको विवरण तयार पारे पुग्थ्यो ।
आगामी जनगणनामा घरधनी बसोबास नगर्ने घर÷भवन÷मल पनि गणना गरिने भएको छ । यसपटक घर बनाउन अनुदान लिए÷नलिएको, बैंक खातालगायतका नयाँ प्रश्न थपिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
तीन करोड नाघ्यो कुल जनसंख्या
२०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जना थियो ।
तथ्यांक विभागको जनसंख्या घडीअनुसार भने शुक्रबार साँझसम्म नेपालको जनसंख्या ३ करोड ७३ हजारभन्दा बढी छ । यो जन्मदर, मृत्युदर र बसाइँसराइँ दरको आधारमा घडीले गणना गरेको जनसंख्या हो ।
नेपालको हालको दैनिक जनसंख्या वृद्धि एक हजारदेखि एक हजार एक सय रहेको विभागले जनाएको छ ।